Stud Manufacturers | China Stud Ndị na-eweta ọrụ, orylọ ọrụ
High ike stud
A na-eji akara aka dị elu eme ihe maka ọrụ ndozi na njikọ nke igwe na-ejikọ. Isi nke abụọ nke stud nwere eri, etiti dị n'etiti ya na ndị dị gịrịgịrị. A na-akpọ ya mkpanaka / adalata mkpanaka, a na-akpọkwa isi abụọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ igwe, àkwà mmiri, ụgbọala, ọgba tum tum, igwe eji esi mmiri, pylons, ụlọ nchara ogologo na nnukwu ụlọ.
Hot-itinye kpaliri stud na-eji maka idozi na njikọ ọrụ nke na-ejikọ ígwè. Isi nke abụọ nke stud nwere eri, etiti dị n'etiti ya na ndị dị gịrịgịrị. A na-akpọ ya mkpanaka / adalata mkpanaka, a na-akpọkwa ya isi abụọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ igwe, àkwà mmiri, ụgbọala, ọgba tum tum, igwe eji esi mmiri, pylons, ụlọ nchara ogologo na nnukwu ụlọ. Mgbe a na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, a na-enweta mmetụta antirust.